Semalt: Chii chinonzi Ratware? Mienzaniso Yakajeka YemaKarita Emapurogiramu Emashoko
Ratware ndeyemhando ye email ye spam inogadzira, inogadzirisa uye inotumira malware kuburikidza nemagwaro uye zvinyorwa zvema email. Iyi purogiramu yakashandiswa inoshandiswa nevadzidzisi vevashandisi uye spammers kuti vashandure nhamba yakawanda yemashupu ewebhu, mablogiki uye vashandisi ve email vachinyora mabhii emaily. Vanotarisira kuparidzira mishonga uye zvinonyadzisira zvinhu kuburikidza ne ratware kana kuedza kutengesa vashandi mu email phishing scam - swivel drip tip for nautilus mini kit.
Michael Brown, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anotsanangura kuti zvikwata zvinowanzovhiringidza kana kuparadza mazai e-mail anobva kwairi kutumira spam. Mareri emareri emarenda anowanzochera chidziro chomunhu akakodzera, chakadai frankjohn@microsoft.com. Aya mazita mazita anoratidza kuti iwe wakarwiswa nezvose zvakarongwa uye zvepamusoro spammers.
Mienzaniso yePalware Mailout Mifananidzo:
Mimwe mienzaniso yakawanda yemishuware ndeyekuti:
Isu tiri mishonga inonyanya kuzivikanwa uye yekambani ye pharmacy (peddling pharmaceutics);
Wakagamuchira I-Insta-Kisses naHelena Gomez (izvi zvinyengeri zvekupengesa zvichange zvichibira mashoko ako ane ruzivo zvakadai semashoko ekukweretesa makadhi);
Steamy Hot Lesbian Girls vanoda kutaura newe pa Live Cameras (kufambidzana nekuona zvinonyadzisira uye zvinhu zvakaoma);
Free 30-yechipiri Chikoro chekutengesa chiripo pano (iyi ndiyo mafomu ekubavha kwekuzivikanwa);
Kurumidza uye upinde mumoyo wako nemweya wako isati yanyanyisa (iyi ipombi uye dump email scam);
Wakawana mifananidzo 15 nemavhidhiyo (phishing scams);
Unogara kupi uye uri kupi? (iriwo maitiro ekuderedza zvinonyadzisira);
Nhamba zhinji dzekutengesa zvinodhura paPadhiri dziripo pano (phishing scams);
Nei uchibata dambudziko?
Nyaya yepamusoro inowanzoitika kuti iite mabasa akasiyana-siyana. Chokutanga, iyo inobatanidza neinternet server yako kana hutano hwepachivande uye inotora zvigadziridzo zvemamiriyoni ako nekusingaperi. Chechipiri, inotumira maeamerica akasiyana-siyana kune vakawanda vashandisi munguva pfupi chaizvo vachishandisa makombiyuta akabatwa. Chechitatu, inodonesa internet yako yekutengesa kuita zvimwe zvinhu zvinotyisa muchivande. Chechina, inodzokorora zviito zvayo kamwe kana kaviri pazuva asikubvumira kuziva kuti spammers vari kushandisa kombiyuta yenyu.
Ndekupi kunowanikwa mazita ako emaateri ema email?
VaHackers uye vashandi vezvigadziriswa vakagadzira nzira dzakasiyana-siyana kuti vapinde maIndaneti emaImiti enyu ega, uye vanoedza kuba mari yako yepachivande uye kutumira mari yako kubva kune imwe bhengi kune imwe. Izvo zvinogona kuisa mavhariyuta / malware mumashandisirwo ako kana kuti kupota kuburikidza nemamwe tsamba inonyunyuta. Kazhinji, purogiramu inopinda maawa edu emareta nenzira dzakasiyana-siyana: runyararo rwandu, shanduro yemhando, black market list, uye kusazvinyora svam list
Nzira yekubvisa sei ratware? Pane pane software here yekugadzirisa nayo?
Zvinosuruvarisa, haungambowani chero anti-ratware tool paInternet sezvo vane malware ane simba uye haagoni kudzivirirwa nemapurogiramu akadai kana zvigadzirwa. Zvisinei, nyanzvi dzakagadzira zvimwe zvekugadzira uye zvishandiso zvinoshandiswa pakavanda pamatare uye dzinoita kuti uchengetedzwe. Aya mapurogiramu anorwa-ratware anotengeswa pamatengo akaremara, pakati pemapoka akatendeseka uye haagoni kuwanika pane mamwe mawebsite ewebhu. Sezvo mapurogiramu anorwa-ratware ari pamutemo uye achida zvakanyanya, iwe unofanirwa kubhadhara chimwe chinhu kubva pa $ 100 kusvika ku $ 5,000 kuti uwane rusununguko rwavo uye kubvisa zvinyorwa zvishoma.